Huntington’s Disease (ဟန်တင်တန်ရောဂါ) - Hello Sayarwon
Huntington’s Disease (ဟန်တင်တန်ရောဂါ)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Huntington’s Disease (ဟန်တင်တန်ရောဂါ)
Huntington’s Disease (ဟန်တင်တန်ရောဂါ) ကဘာလဲ။
ဦးနှောက်အတွင်းမှာရှိတဲ့အာရုံကြောတွေကို ပျက်စီးစေတဲ့မွေးရာပါမျိုးရိုးလိုက်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်ပျက်စီးမှုက အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ ပိုဆိုးလာပြီး လှုပ်ရှားမှု၊ မှတ်ဉာဏ် ( အာရုံသိနိုင်စွမ်း၊ တွေးခေါ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း) နဲ့အပြုအမူတွေကို သက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
အစောပိုင်းလက္ခဏာတွေကတော့ ကိုယ်ရေးကိုယ်သွေးပြောင်းလဲမှုများ၊ ခံစားချက်အပြောင်းအလဲ၊ ဂနာမြငိမ်ခြင်း၊ နေမထိထိုင်မသာဖြစ်ခြင်း၊ နဲ့အမူအကျင့်ဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဟန်တင်တန်ရောဂါကို ဟန်တင်တန်ကကြောဆွဲခြင်းလို့ အရင်ကခေါ်ကြပါတယ်။ ကကြောဆွဲသလိုမျိုး လှုပ်ရှားမှုတွေကိုမထိန်းနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါလို့သတ်မှတ်ရခြင်းက လှုပ်ရှားမှုမူမမှန်ခြင်းထက် အများကြီးပိုပါဝင်နေသေးတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
Huntington’s Disease (ဟန်တင်တန်ရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
မိသားစုလိုက်ဖြစ်သောရောဂါအဖြစ် စံသတ်မှတ်ထားရခြင်းမှာ ဟန်တင်တန်ရောဂါသည်မိဘတိုင်းရဲ့ ကလေးတိုင်းမှာ ရောဂါဖြစ်စေနိုင်တဲ့မျိုးရိုးဗီဇ 50/50သယ်ဆောင်ထားနိုင်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့မျာ လက္ခဏာပြနေတဲ့ အမေရိကန်လူမျိုး၃၀၀၀၀ခန့်ရှိပြီး မျိုးရိုးလိုက်နိုင်ချေ၂၀၀၀၀၀ထက် ပိုများနေပါတယ်။
သို့ရာတွင် ဖြစ်နိုင်ချေတွေကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ထပ်သိလိုတာတွေကို သင့်ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
Huntington’s Disease (ဟန်တင်တန်ရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
မြောက်မြားလှစွာသောလက္ခဏာတွေနဲ့အတူ လှုပ်ရှားမှု၊ မှတ်ဉာဏ်နဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကို ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးပေါ်လာတတ်တဲ့လက္ခဏာတွေက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူတတ်ကြပါဘူး။ ရောဂါဖြစ်နေစဉ်အတွင်းမှာ အချို့သောမူမမှန်ခြင်းတွေက ပိုပြီးသိသာလာတာမျိုး၊ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေအပေါ် သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်ပါတယ်။
ဟန်တင်တန်ရောဂါနဲ့ဆက်နွှယ်တဲ့ရွှေ့လျားမှုဆိုင်ရာပြဿနာတွေမှာ မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ရွှေ့လျားမှုတွေအပြင် ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုများမူမမှန်ခြင်းများလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ကြွက်သားပြဿနာများ၊ ကြွက်သားတောင့်ခြင်း၊ ကြွက်သားတုန်းမကောင်းခြင်း
လမ်းလျှောက်ပုံ၊ ကိုယ်နေဟန်ထားဟန်ချက် မညီခြင်း
ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုများခက်ခြင်း – အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ ဆက်သွယ်နိုင်စွမ်းကျခြင်း
လုပ်ဆောင်မှုတွေမှာ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အာရုံစူးစိုက်နိုင်မှုခက်ခြင်း
အတွေးတစ်ခု၊ အမူအရာလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုအပေါ်မှာ ငြိတွယ်နေလိုခြင်း၊ လိုက်လျောညီထွေမရှိခြင်း
ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကြောင့် စဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲပြုမူလုပ်ကိုင်ခြင်း၊ လူတကာနဲ့သောင်းပြောင်းလိင်ဆက်ဆံခြင်း
အသစ်အသစ်များကိုသင်ယူရာတွင် ခက်ခဲခြင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစိတ်ကျခြင်းက ဟန်တင်တန်ရောဂါနဲ့ဆက်နွှယ်တဲ့အဖြစ်အများဆုံးစိတ်ဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဟန်တင်တန်ရောဂါမှန်းအတည်ပြုနိုင်ဖို့အတွက် မရိုးရှင်းပါဘူး။ စိတ်ကျခြင်းဖြစ်ပွားရခြင်းက ဦးနှေက်ကိုထိခိုက်မိပြီး ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်တွေပြောင်းလဲသွားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ လက္ခဏာတွေကတော့
ကသိကအောက်ဖြစ်ခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ ခံစားချက်ကင်းမဲ့ခြင်း
သေချင်သည့်အတွေးများ၊ သတ်သေလိုသည့်အတွေးများ မကြာခဏဖြစ်ပေါ်ခြင်း
ငယ်ရွယ်သူတွေမှာတွေ့ရတဲ့ဟန်တင်တန်ရောဂါရဲ့လက္ခဏာများငယ်ရွယ်သူတွေမှာ စဖြစ်ပွားချိန်နဲ့ဖြစ်ပွားမှုတိုးတက်လာနှုန်းက အရွယ်ရောက်ပြိးသူတွေနဲ့တော့ အနည်းငယ်ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ ရောဂါအစပိုင်းမှာထဲက ပြတတ်တဲ့ပြဿနာတွေကတော့အပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများ
အထူးသဖြင့် ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးများမှာတွေ့ရတဲ့ ကြွက်သားများတောင့်တင်းခြင်း
စောစောစိးစီးရောဂါ၇ှာဖွေပြီး ကုသမှုပေးခြင်းက ဟန်တင်တန်ရောဂါကိုပိုဆိုးသွားအောင်ဖြစ်စေခြင်းမှာ တားမြစ်ပေးပြီး အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ခြင်းက ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေတွေကို ကာကွယ်ဖို့ တတ်နိုင်သမျှ ဆရာဝန်နဲ့တွေ့သင့်ပါတယ်။ အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေရှိနေမယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် အခြားမေးခွန်းတွေရှိနေမယ်ဆိုရင် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ လူတိုင်းက တုန့်ပြန်ပုံချင်းမတူပါဘူး။ သင့်ရဲ့အခြေအနေသင့်တော်အကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက် သင့်ဆရာဝန်နဲ့သာဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
Huntington’s Disease (ဟန်တင်တန်ရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
မျိုးရိုးဗီဇဂျင်းတစ်ခုမှာ ချို့ယွင်းသွားခြင်းက ဟန်တင်တန်ရောဂါကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ မူမမှန်တဲ့ဂျင်းအပွားတစ်ခုတည်းကတင် ရောဂါကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ မိဘနှစ်ပါးတည်းကတစ်ယောက်ယောက် မျိုးရိုးဗီဇချို့ယွင်းမှုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် မျိုးရိုးလိုက်နိုင်ဖိုပ၅၀ရာနှုန်းသေချာနေပါတယ်။
သင်ကနေလည်း သင့်ကလေးကိုလက်ဆင့်ကမ်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ဟန်တင်တန်ရောဂါကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာထွန်းခြင်းက အခြားထွန်းခြင်းတွေနဲ့ကွဲလွဲပါတယ်။ ဂျင်းမှာ အစားထိုးခံ၇ခြင်း၊ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အပိုင်းတွေ မရှိပါဘူး။ ပွားရာမှာမှားသွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျင်းအတွင်းတစ်နေရာကို အကြိမ်ကြိမ်ပွားမိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ထပ်ခါထပ်ခါပွားတဲ့အရေအတွက်က မျိုးဆက်တစ်ခုချင်းဆီမှာ များများလာနိုင်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဟန်တင်တန်ရောဂါလက္ခဏာတွေက ပွားတဲ့အကြိမ်များလေ စောစောပေါ်လေဖြစ်ပါတယ်။ ထပ်ခါထပ်ခါပွားလေ ရောဂါကလည်းပိုပိုဆိုးလာလေ ဖြစ်ပါတယ်။
Huntington’s Disease (ဟန်တင်တန်ရောဂါ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
မျိုးရိုးလိုက်တဲ့ရောဂါဖြစ်တာကြောင့် ဒိအခြေအနေအတွက် ဖြစ်ပွားစေနိုင်ချေကို မြင့်စေသည့် အကြောင်းရင်းများမရှိပါဘူး။
Huntington’s Disease (ဟန်တင်တန်ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
အတည်ပြုဖို့အတွက်က မေးခွန်းတွေအပေါ်သင့်အဖြေ၊ အထွေထွေစစ်ဆေးခြင်း၊ သင့်မိသားစုကျန်းမာရေးရာဇဝင်၊ အာရုံကြောနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုများအပေါ် အဓိကအခြေခံထားပါတယ်။
အာရုံကြောအထူးကုက သင့်ကိုမေးခွန်းတွေမေးပြီး ရိုး၇ှင်းတဲ့စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
အာရုံကြောအထူးကုက အောက်ပါစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်က သက်ဆိုင်တဲ့စစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုတွေ ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
-ဦးနှေက်ပိုင်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း (CT-scan, or MRI)
Huntington’s Disease (ဟန်တင်တန်ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဟန်တင်တန်ရောဂါကို ပျောက်ကင်းအောင်မကုသနိုင်ပါဘူး။ ရောဂါအခြေအနေက သက်သာသွားတာရှိနိုင်သလို ပိုဆိုးသွားတာလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ အခြေအနေပိုဆိုးလာလေ မိသားစုနဲ့အခြားဆက်ဆံရေးတွေမှာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ကုသမှုက ခံစားချက်ပိုင်းပြဿနာတွေကို ပိုတိုးတက်လာအောင်၊ နေ့စဉ်ဘဝမှာ အချိန်အတော်ကြာဒုက္ခပေးနေတဲ့ အခြေအနေကို ပိုကောင်းအောင် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဆေးတွေက နေမထိထိုင်မသာဖြစ်ခြင်း၊ အလွန်အကျွံလှုပ်ရှားခြင်းစတြ့ဲအချို့လက္ခဏာတွေကို သက်သာစေပါတယ်။ စကားဘာသာစကားဆိုင်ရာကုထုံးနဲ့ အလုပ်အကိုင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကုထုံးက ဆက်ဆံရေးနဲ့နေ့စဉ်ဘဝကို ကူညီပေးနိုင်ပါယတ။် လူနာရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလည်း စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ လက္ခဏာမပြတဲ့အခြားမိသားစုဝင်တွေကိုလည်း ဂျင်းသယ်ဆောင်ထားခြင်းရှိမရှိနဲ့ အိမ်မှာပဲကုသမှုပေးနိုင်အောင်ကူညီပေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြိး စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ။်
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက ဟန်တင်တန်ရောဂါ
ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် ဟန်တင်တန်ရောဂါ
ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ရောဂါသည်တွေမှာ ကိုယ်အလေးချိန်ကျန်းမာအောင် မထိန်းထားနိုင်ကြပါဘူး။ အစားစားရခက်ခြင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် ကယ်လိုရီမြောက်များစွာလိုအပ်ခြင်းနဲ့ ဇီဝဆိုင်ရာပြဿနာတွေက အကြောင်းရင်းပြဖစ်နိုင်ပါတယ်။ အာဟာရလုံလုံလောက်လောက်ရဖို့ဆိုရင် တစ်နေ့ကို၃ကြိမ်ထက်ပိုစားပေးဖို့လိုပါတယ်။
ဝါးရခက်ခြင်း၊ မျိုချရခက်ြခ်ငးနဲပ လှုပ်ရှားမှုခက်ခြင်းက စားတဲ့ပမာဏကိုနည်းစေပြီး အစာနင်ခြင်းကို ဖြစ်နုငိချေများစေပါတယ်။ အစားစားနေစဉ်မှာ ပျံလွင့်မှုတွေကိုနည်းစေဖို့နဲပ စားဖို့လွယ်တဲ့အစားတွေကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ပြဿာနာကိုနည်းစေနိုင်ပါတယ်။ လှုပ်ရှားမှုမကောင်းတဲ့လူနာတွေအတွက် အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့အိုးခွက်တွေနဲ့ ပိုက်ဒါမှမဟုတ်နှုတ်သီးကရားပါတဲ့ခွက်တွေကို အသုံးပြုခြင်းက အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ။်
တာဝန်များကို စီမံနိုင်တဲ့အဆင့်များအဖြစ်သို့ ပိုင်းလိုက်ခြင်း
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ အောက်တိုဘာ 28, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 22, 2018
Huntington’s disease. http://www.webmd.com/brain/hungtingtons-disease-causes-symptoms-treatment#2 . Accessed November 29, 2016.
Huntington’s disease. http://www.healthline.com/health/huntingtons-disease#Overview1 .Accessed November 29, 2016.
Huntington’s disease. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/huntingtons-disease/basics/lifestyle-home-remedies/con-20030685 . Accessed November 29, 2016.